စီးပွားရေးအတွက် blogging | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 19, 2014 Douglas Karr
သင်မှာမဟုတ်ခဲ့လျှင် Webtrends Engage 2010 ကွန်ဖရင့်, သင်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးညီလာခံလွဲချော်။ Engage ဟာငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အခြားကုမ္ပဏီကွန်ဖရင့်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ online industry မှအကောင်းဆုံးနှင့်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောကျွမ်းကျင်သူအချို့နှင့်ထိတွေ့မှုရှိစေရန်ဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကိုပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။ နောက်နှစ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ San Francisco မှာပါ - သူတို့ကအမြဲရောင်း!
ဒီနှစ်မှာတော့အွန်လိုင်းစျေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၁၀ မိနစ် PowerPoint ကို Sprint လုပ်ဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတယ်။ ငါသတ္တုတွင်းအပေါ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (တင်ဆက်မှုကိုသင်မတွေ့ပါကနှိပ်လိုက်ပါ) New Orleans တွင်ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးအကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအထူးပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စားသုံးသူစျေးကွက်သို့လည်းသက်ရောက်သည်။
မူရင်းတင်ဆက်မှုသည်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လှပစွာဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်နောက်ကွယ်ရှိပေ ၈၀ ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆန့်ထားသောကြောင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်အသားများရှိသည်။
အကယ်၍ သင်က New Orleans တွင်ရှိလျှင်သင်အမှန်တကယ်အားရကျေနပ်မှုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိန့်ခွန်းကိုပြုလုပ်ပြီး Social Media ကိုအကနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ငါပင်ခြေလှမ်းစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ပစ်ချရယ်မောတယ်တယ်။ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်အကြီးအအချိန်ပဲ!
ဒီနေရာမှာဆလိုက်များ၏အကြောင်းအရာကို rundown ဖြစ်သည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာသည်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂရိတ်အကြောင်းအရာသည်ထိရောက်သောသော့ချက်စာလုံးများအသုံးပြုမှုနှင့် visitors ည့်သည်များမေးသည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုသောအကြောင်းအရာပေါင်းစပ်မှုလား။ နှင့်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လာမည့်ခြေလှမ်းမှသူတို့ကိုအားပေး။ သင်၏ဘလော့ဂ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Social Media သည်ရှာဖွေမှုကိုဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူကိုဖြစ်စေသြဇာသက်ရောက်သည်။ ယခုအလားအလာသည် Search Engines နှင့်သူတို့၏ Social Network မှသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည်အလားအလာရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်လိုပါက၎င်းတို့သည်ရှာဖွေရေးတွင် ဦး ဆောင်ရန်နှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အလားအလာကောင်းများရရန်စောင့်ဆိုင်း။ မရနိုင်တော့ပါ။ သူတို့ထံလာပါ။
တစ်ခုတည်းသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တိုင်းသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းရှိသင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤသည်သည်အရေးယူခြင်း၊ ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာသို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
လူအများစုကစာမဖတ်တတ်ကြဘူး။ ထပ်ခါတလဲလဲလူအများစုမမှတ်မိဘူးလား whitespace ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုပါ၊ ပုံများဖြင့်သင်္ကေတလုပ်ပြီးဗီဒီယိုနှင့်အသံထည့်ပါ။ အာရုံ, အစာကျွေး: အမြင်, ကွားနိုငျ, kinesthetic ။
ဒေါင်းလုပ်များ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ၊ အီးမေးလ်များ၊ ဤရွေးချယ်မှုအားလုံးသည် ဦး ဆောင်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အချက်အလက်ပုံစံလိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့ blog ကအခမဲ့လား။ ဒေတာအတွက်အခြားအရာအားလုံးကုန်သွယ်!
အနည်းဆုံးဒေတာပမာဏကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး ဦး ဆောင်မှုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ပါ။ အဲဒါကိုရိုးရိုးလေးလုပ်ပါ ဤသည်မှထိပ်တန်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Compendium.
မင်းရဲ့ဆောင်ယူလာပုံကိုတိုင်းတာပါ။ စုစည်းခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာ၊ အီးမေးလ်သတင်းလွှာများ၊ အဖြစ်အပျက်များစသည်ဖြင့်သင်ကမည်သည့်အချိန်တွင်အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်ကိုခွဲခြားသိမြင်စေလိမ့်မည်။
ရည်ညွှန်းထားသောဒိုမိန်းများကိုကြည့်ပါ၊ ပန်းတိုင်များထားပါ၊ သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းအသွင်အပြင်များကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ငါက Douglas Karr (တွစ်တာ - @douglaskarrသင်အကူအညီလိုလျှင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ DK New Media.
Super Bowl နှင့်ပတ်သက်ပြီး Indianapolis မှ New Orleans သို့စိတ်ကူးဖြင့်တံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခန့်မှန်းချက်သည်စတုတ္ထလေးလပတ်တစ်နေရာရာတွင်စိတ်ပျက်သွားပြီး Saints ပရိတ်သတ်များကကျွန်ုပ်ကိုတနင်္ဂနွေညတွင်အသိပေးလိုက်သည်။
Tags: စီးပွားရေးအတွက် bloggingseo အတွက် bloggingကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးseoWebtrends ထိတွေ့ဆက်ဆံ
ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါ